Ny Apple Watch Series 3 koa dia misy ny fanambarana Krismasy | Avy amin'ny mac aho
Ny fampielezan-kevitry ny Krismasy an'i Apple dia nanomboka andro vitsivitsy lasa izay. ny doka voalohany natolotry ny ao Cupertino mifantoka amin'ny iPhone X, Apple Music ary ny headphones tsy misy tariby malaza, ny AirPods. Na izany aza, misy ny ekipany hafa mety iray amin'ireo kintana amin'ny fety Krismasy ho avy: ny Apple Watch Series 3.
Mba hamporisihana ny fividianana azy dia nanapa-kevitra ny hamoaka i Apple, tsy iray na roa, fa hatramin'ny doka efatra mifantoka amin'ny endri-javatra ho an'ny smartwatch ao amin'ny kinova farany. Tsarovy izany any Espana dia mbola tsy amidy amina fifandraisana LTE io, ny fananany lehibe ary ny antony lehibe hanavaozana an'ity kinova farany ity; Apple dia mbola tsy nahatratra ny fifanarahana ilaina mba hahafahan'ny Apple Watch Series 3 tsy miankina amin'ny iPhone. Saingy, apetraka ankilabao ity lohahevitra ity, andao hifantoka amin'ny fanambarana efa nomaninao.
Ny voalohany amin'ireo horonantsary dia mampiseho amintsika ny fomba ampiasain'ny mpampiasa mahazo antso an-tariby amin'ny alàlan'ny Apple Watch Series 3 ianao mandritra ny snowboarding. Midika izany fa tsy mila mitondra telefaona finday ianao raha te hifandray amin'ny olona mifandray aminao rehefa milalao fanatanjahan-tena.
Ny faharoa amin'izy ireo dia miantso anay amin'ny fiofanana amin'ny baolina kitra. Amin'ity tranga ity, ny fahafahan'ny fifandraisana amin'ny olon-tianao dia asongadino indray, fa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra. Fahalalahana tanteraka hampiasa tambajotra finday nefa tsy mila manana telefaona finday amin'ireo tranga rehetra ireo.
Ny fahatelo dia mitondra antsika amin'ny fotoam-pampiofanana. Raha izany dia Apple Watch Series 3 mizara ny fahalala-tànana amin'ny AirPods. Ity horonan-tsary ity dia manasongadina ny mety hanaraha-maso ny fampihetseham-batana ataonao eo am-pihainoana ny mozika tianao.
Ary farany, mety hisy ihany koa amin'ny ny fampiasana ny Apple Watch Series 3 dia ny hahafahana mampiasa azy io rehefa zatra milomano isika. Amin'ity tranga ity dia tsy ho mpanamboatra dobo filomanosana izay ataontsika izy io. Ary ny fihazonana fifehezana ny fanatanjahan-tena dia tsy azo atao intsony amin'ny toerana maina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch Series 3 koa dia manana ny fanambarana Krismasy